Umkhiqizi we-Best Slim Lift & Slide System | AmaMede
Amandla Wokulayisha UMax 600kg
I-Slimline ene-Corner Opening Iyatholakala
Amapayipi anelungelo lobunikazi nokwakhiwa kwesakhiwo
Kokubili Izinguqulo zeManyuwali Nezimoto Ziyatholakala
Ukujiya kodonga lwephrofayili: 2.5mm
Usayizi wozimele: 140mm
Ukujiya kwengilazi: 46mm
Umthwalo omkhulu: 300kg
Usayizi we-Interlock: 32mm
Ukujiya kodonga lwephrofayili: 3.0mm
Usayizi wozimele: 190mm
Umthwalo omkhulu: 600kg
Isikhala siyagqama lapho siqukethe umqondo omuhle wokuhlaliswa kwabantu. IMEDO ikholelwa ukuthi ukutholakala kobuhle obuyingqayizivele bokwenza izinto kube lula kusekelwe emininingwaneni emikhulu nokusebenza kahle. Umkhiqizo ukuhlangabezana nezifiso zabantu ezahlukahlukene zempilo esezingeni eliphakeme kanye nokuphishekela ubuhle bangaphambili.
I-Slimline Lift And Slide Door System
Ungasifaka kanjani isicelo se-slimline lift nesilayidi esakhiweni luhlobo lwangempela lwe-tangle. Ungakuqinisekisa kanjani ukumelana nokucindezela komoya okuqinile, ukuthwala umthwalo osindayo, ukuqina kwamanzi, ukuqina komoya ... zonke lezo yizinkinga abaklami beMEDO abadinga ukuzixazulula.
lt kuyinselelo eyedlulele yokwenza iminyango eslayidayo ibe nkulu ngosayizi, ibe mincane ngemigqa emihle, futhi ikhonze kakhulu ekusebenzeni!
Ubukhulu bodonga obungu-3.0mm, ulayini wephrofayili olinganiselayo, ikhefu eliphindwe kabili lokushisa, umsebenzi osindayo ophethe umthwalo omkhulu we-50Okg: konke lokho kukhombisa abaklami ikhono elivelele ekwakhiweni kwesakhiwo sephrofayili nokuphishekela ekugcineni kwesisombululo sehadiwe.
Dual break ezishisayo, clamping ithrekhi
Dual ezishisayo ukwakheka kwesakhiwo ukufeza ukushisa okukhulu kokushisa okushisayo. Phakamisa futhi ulayishe uhlelo olunama-gaskets akhethekile wokuvala uphawu kanye nomugqa wokufaka uphawu ongaphakeme wokufeza ukusebenza okuphezulu kokuqina komoya, ukuqina kwamanzi nokufakwa okushisayo. Ukunikezelwa kwesondo lokulinganisa kanye nethrekhi yokuqinisa ukwenza amawindi neminyango kuzinze.
Idizayini ekhethekile yokudonsa amanzi, ukubuka kwe-panoramic
3 izixazululo zamapayipi nge-design ekhethekile yokuphela kwamapayipi nokuklanywa kwethangi lokuhambisa amanzi ukwanelisa izimo ezahlukene ngokuqina kwamanzi okuhle. Idizayini eyakhiwe yomugqa omncane eqinisiwe yosayizi omkhulu wesango lesilayidi esinombono ongenamkhawulo.
Ukuthwala okuphezulu, i-2-Track / Iphaneli, i-2-Lock / iPhaneli
Ithrekhi / Iphaneli Yesibili
Ukukhiya okubili / Iphaneli
I-roller yomsebenzi osindayo namathrekhi ama-2 nge-sash ngayinye ukufinyelela ubukhulu obungama-600kg ngamapaneli amakhulu we-panoramic. Khiya kabili iphaneli ngayinye ye- ukuphepha okungavamile nobufakazi bokugqekeza.
Isilawuli kude se-Smart
Ukusebenza ngezimoto ekhaya elihlakaniphile. Umsebenzi osindayo wokugoqa phansi omkhulu ama-panoramic panels. Uhlelo lokuphakamisa nesilayidi lunikeza ukubekwa uphawu okuhle kakhulu iminyango yangaphandle. Ukucushwa ngokhiye wokuphepha okwengeziwe nobumfihlo.
Isakhiwo sekhefu lesibili esishisayo kanye nethrekhi yokubambelela
Dual ezishisayo break isakhiwo design ukufeza ukwahlukanisa okuphezulu okushisayo ukusebenza. Phakamisa futhi ulayishe uhlelo olunama-gaskets wokuvala uphawu akhethekile futhi umucu wokufaka uphawu ophansi ukufeza ukusebenza okuphezulu kokuqina komoya, ukuqina kwamanzi nokufakwa okushisayo. Kunikezelwe isondo lokulinganisa futhi ithrekhi yokubambelela ukwenza amawindi neminyango kuzinze kakhudlwana.
Ithrekhi ephansi ephezulu, ukubuka kwe-panoramic
Ithrekhi ephansi ephezulu
Idizayini ephezulu yethrekhi yokuqina kwamanzi okuhle kakhulu. Ukuvalwa okuncane kwe umbono we-panoramic.
Fan Single evulekile futhi close, umthwalo High eziveza
I-fan eyodwa ivuliwe / icishiwe
Iphaneli lokuvula elilodwa ukuhlangabezana nesidingo somsebenzi wesimo esikhethekile. Umsebenzi osindayo wokugoqa phansi wokuvula okukhulu ngokubuka okungenamkhawulo.
Phakamisa futhi ulayishe uhlelo lwangaphandle oluhle lokufaka uphawu emnyango. Isilinda ukumiswa kokuphepha okwengeziwe nobumfihlo.
Ukumelana Nokungena Okuphoqelelwe Okuthuthukisiwe
Lapho umnyango wokuphakamisa nowesilayidi uvaliwe futhi isibambo sifakwa endaweni evaliwe, akuzona nje kuphela izindlela zokukhiya ezibandakanyiwayo, kepha isisindo esigcwele somoya sibekwa ohlakeni. Abangeneli ngeke nje badinge ukuzakhela ngokwanele ukwephula inqubo yokukhiya amaphuzu amaningi, kepha futhi nokuhambisa isisindo somoya.
Ngaphezu kwalokho, noma ngabe umoya ushiywe uvuleke kancane ukuze ungene umoya, awunakucindezelwa uvuleke inqobo nje uma isibambo singeke sisuswe ngaphandle.
Ukuqina Kwamanzi Okungcono | Ukuqina Komoya Okungcono | Ukuphila Isikhathi Eside
Isicabha sokuphakamisa nesilayidi sisebenzisa indlela ephakamisa iphaneli ngaphambi kokushelela ukugwema izingqinamba zeminyango ejwayelekile yokuhambisa futhi inikeze ukusebenza okungcono kakhulu ekuqineni kwamanzi nasekuqineni komoya. Okokuqala, kuvumela izimvu zamanzi ukuba zinqamule futhi zigweme noma yikuphi ukuvezwa kokushayisana phakathi nokusebenza; Okwesibili, ama-sealant thicker angasetshenziswa ngoba awafaki emzamweni wokuvula iphaneli.
Ngaphezu kwalokho, isikhathi sokuphila siyakhula njengoba izimvu zamanzi zingabonakali ekugqokeni nasekulimaleni kokungqubuzana.
I-Easy & Ultra Smooth Operation
Amasistimu we-MEDO Lift ne-Slide avumela umsebenzisi ukuthi avule ngisho namapaneli angaphezulu kakhulu ngokucindezela ngomunwe.
Ngaphezu kwephaneli eliphakanyisiwe livikelwe emonakalweni obangelwe uthuli namatshe amancane kuthrekhi,
IMEDO Lift neSilayidi Seminyango zisebenzisa ama-premium high-performance roller bearings ukuthuthukisa ukusebenza ngokushelela.
Ngakho-ke, umnyango wokuphakamisa nesilayidi unconywa kakhulu ngamapaneli amakhulu anesisindo esisindayo.
Ngesiphatho esisebenziseka kalula futhi esinegunya lobunikazi lokuhambisa, ngisho nezingane nabadala bangaphakamisa kalula iphaneli elisindayo.
Ukunyakaza okulula nje akugcini nje ukuvula umnyango kodwa futhi kuphakamisa umnyango ngasikhathi sinye.
Ayikho enye indlela yokukhiya esebenza ngomunwe edingekayo, futhi ngeke iminyaniswe ngokuhamba kwesikhathi.
Langaphambilini Curtain Wall System
Olandelayo: Ukuslayida Iwindi